Izici Ezingama-200 ku-Google Algorithm | Martech Zone
Izici Ezingamakhulu amabili ku-Google Algorithm
NgoLwesibili, ngoJuni 4, i-2013 Douglas Karr
Yebo, lokhu akuyona into elula kepha kudos ukuyenza Backlinko futhi I-SingleGrain ukuhlanganisa le infographic ehlose ukusabalalisa i-algorithm yezinga le-Google. I-infographic ihamba ngezici zesizinda, izici zezinga lekhasi, izici ezingeni lesayithi, izinto ezingemuva kwe-backlink, ukuxhumana komsebenzisi, izinkomba ezingeziwe nezimpawu zomphakathi. Njengoba bengasebenzisi i isisindo entweni ngayinye,
Angizukukhetha uhlu ... Angikholwa ukuthi konke ukulinganiswa komthelela kepha okuyizinto ezingakuthinti ukusebenza kwenjini yakho yokusesha ngokwandisa isilinganiso sokuchofoza. Kunoma ikuphi - uhlu olukhulu olunzulu ongalubuyekeza futhi ucabange ngalo njengoba wenza okuqukethwe kwakho kukuthuthukise.
Phinda ubeke kabusha ku-Facebook nge-AdRoll Retargeting
I-BugHerd: Khomba, Chofoza bese uhlanganyela kuwebhu
Jun 4, 2013 ku-10: 18 PM
Uhlu oluphelele kakhulu. Kukhanyisa okuningi ukuthi kungani ama-plugins we-SEO eneningi lalokhu okungenhla kuhlanganiswe kuwo. Isibonelo, i-SEO Presser. Ngiyabonga ngalokhu "konke endaweni eyodwa".
Isixazululo seWebex Data
Jun 4, 2013 ku-11: 17 PM
Uhlu oluthakazelisa kakhulu! Siyabonga ngomzamo omuhle
UJacquelyn Kissee Myers
UJun 6, 2013 ngo-7: 50 AM
Insiza enhle uDoug! Kuzoba yinto engiyibhukumaka! Ngaphansi kwesigaba sezici zezinga lesayithi, amazwibela wokuqukethwe ayimpinda anokuqukethwe "okuphindiwe". Ight Ungafuna ukuyilungisa.
UJun 13, 2013 ngo-7: 17 AM
Siyabonga ngale infographic efundisayo kakhulu.
Ukuphawula okukodwa (ngaphandle kwalokhu okuvele kuthunyelwe nguJacquelyn): ungahle uthande ukushintsha amazwibela ngaphansi kwe- "Isikhathi Esizeni" futhi :).
Izindawo zokudlela eMangalore
Sep 6, 2013 ku-1: 10 AM
Isithombe esihle se-infographic. Uma kunokwenzeka, yisho iwebhusayithi yakho ne-URL yayo usebenzisa igama elingukhiye. Kumele
yisebenzise futhi kusihloko, encazelweni, nakumathegi we-meta wewebhusayithi yakho.
Abanye bathi kulezi zinsuku iGoogle ayisabheki omaki be-meta
usezingeni lemiphumela yokusesha.
Jul 27, 2015 ku-6: 26 AM
Jul 27, 2015 ngo-12: 46 PM
Okthoba 10, 2015 ngo-11: 48 AM
Wow ngisanda kuthola le ndatshana kuGoogle futhi ngiyabonga kakhulu kwi-Marketing Tech Blog nge-infograph enhle kangaka elula kakhulu ukuyinakekela.